चीनले हिमालय हटस्पटहरुमा अ’तिक्र’मण गर्दै, सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ दा’बी ! – Sanchar Patrika
चीनले नेपाल-चीन र भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा सैन्य संरचनाहरु बनाउनुका साथै सैन्य उपस्थितिसमेत बढाइरहेको छ।नेपालको सगरमाथामा चीनले आफ्नो दा’बी गरिरहँदा पनि नेपालका राजनीतिज्ञ र सरकार सञ्‍चालकहरु भने सत्ता खेलमा व्यस्त छन्।त्यसैगारी कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । प्याज कपाल झर्ने र दुई मुखे कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । प्याजमा रहेको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, जसले कपालको विकासका लागि मद्दत पुग्छ ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार २७ गते शनिबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
Nextबिहेको ९ दिनमै बिछोडः श्रीमानको इकाउन्टर, श्रीमती जेलमा
आकासियो चिनीको भाउ,अब किलोको यती…
भ्र’ष्टाचा’रविरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हाल्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली